‘L Japan’: Olon-droa miaraka mibilaogin-dahatsary ny fiainan’ny vehivavy mifanambady · Global Voices teny Malagasy
"Tianay ho hita fa tahaka ireo olon-droa hafa miaraka izahay"
Voadika ny 25 Febroary 2020 3:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Ελληνικά, Español, Français, Esperanto , 日本語, English
L Japan, bilaogin-dahatsary YouTube nataon'ny “Vehivavy lesbiana Iraisam-pirenena Monina any amin'ny Faritr'i Kansai any Japana, Miho (Japoney) sy Clare (Amerikana)”.
“Mahafinaritra ny manatontosa lahatsary, fomba vaovao famoronana ho anay ary fomba mahafapo ihany koa ho anay mba ‘hisehoana’ sy hireharehana,” hoy i Clare, izay nanatontosa niaraka tamin'ny sakaizany Miho ny “L Japan”, bilaogin-dahatsary YouTube momba ny fiainan'ny lesbiana any Japana. Mampahafantatra ny tenany ho lesbiana i Miho sy i Clare.
“Nanapa-kevitra izahay fa hanomboka ny fantsona YouTube voalohany satria, raha nahita ireo vehivavy samy Japoney mifanambady izahay fa tsy nahita olona toa anay,” hoy i Clare tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Global Voices. “Ary naniry ny hamorona loharano manokana aho ho an'ny vehivavy hafa toa ahy izay te hihaona manokana amin'ny vehivavy ao Japana kanefa mihevitra foana fa tsy azo tanterahana izany.”
Avy any Florida, Etazonia i Clare, raha avy ao amin'ny Perfektioran'i Nara kosa i Miho. Samy mipetraka ao amin'ny tanàna seranan-tsambo Japoney ao Kobe, any andrefan'i Osaka izy ireo ankehitriny ary efa niaraka nandritra ny herintaona sy tapany.
“Manana lahatsary izay misy anay roa miresaka amin'ny teny Japoney momba ny lohahevitra isankarazany izahay, miala voly, na mampiaraka,” hoy i Clare tamin'ny Global Voices.” Manana lahatsary izay nataoko irery ihany koa aho, amin'ny fiteny Anglisy, momba ny fiarahan'ny vavy samy vavy any Japana.”
Nanomboka ny fantsona i Miho sy i Clare tamin'ny volana Novambra 2019, ary efa namoaka horonantsary efa ho telopolo hatreto. Ao amin'ity lahatsary eto ambany ity dia niverina nakany Nara i Clare sy Miho mba hihaona amin'ny ray aman-drenin'i Miho, ary nisaintsaina ny taona hoavy ihany koa izy ireo. Amin'ny teny Japoney ilay lahatsary saingy misy dikantsoratra Anglisy ny YouTube .
“Mankasitraka anay avokoa ny fianakavian'i Miho (any Nara), anisan'izany ny raibe sy ny renibeny, 87 sy 91 taona” hoy i Clare izay nilaza ihany koa fa amin'ny ankapobeny dia mahazo aina tsara izy monina ao Japana amin'ny maha lesbiana azy.
“Toa tsy dia manan-kevitra loatra momba ny olona LGBT ny vahoaka Japoney, izay amin'ny lafiny iray, manasarotra ny fikatrohana, (toa ny fanovana ny lalàna momba ny fanambadian'ny mitovy fananahana), saingy afaka mivoaka tsy misy olana,” hoy izy. “Mifampitantana tsy misy ahiahy izahay ary milaza amin'ny hafa fa miaraka. Gagagaga ny olona sasany amin'izany, saingy mbola tsy nanao fihetsika miiba mihitsy taminay. ”
Mbola mijanona ho olana fototra ho an'ny LGBTQ + monina any Japana ny fanambadiana mitovy lanja sy ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Nolavin'ny Praiminisitra Japoney Abe Shinzo ny fitakiana hanaovana ho ara-dalàna ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana tamin'ny voalohandohan'ny volana Febroary. Noho ny tsy fisian'ny fanentanana nasionaly momba io olana io dia tsy mitsaha-mankasitraka ny fiarahan'ny samy lahy sy ny samy vavy ny tompon'andraikitra eo an-toerana sy ny monisipaly manerana an'i Japana, izay misy fiantraikany lehibe amin'ny fizaram-pananana, drafi-pananana ary drafitra fisotroan-dronono.
“Tsy mbola nankatoavina eto amin'ny misy anay (any Kobe) ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana, kanefa miha-mitombo ny faritra manodidina manao izany ary mino aho fa fotoana sisa no andrasana hampiharan'i Kobe ihany koa ny rafitry ny “fiarahana”, hoy i Clare. “Mikasa ny hivady any ivelany izahay na dia tsy ho ekena eto aza izany.”
Nilaza anefa i Clare ny hariva na dia izany aza fa ny hamalifaly sy hampahafantarana ny fiainana any Japana no tanjon'izy ireo.
“Na dia manao fanentanana ny lahatsarinay aza izahay miaraka amin'ny tenirohy toy ny “olon-droa lesbiana’ na ‘olon-droa iraisam-pirenena’ dia tianay ho hitan'ny olona fa tsy misy hafa amin'ny olon-droa hafa miaraka izahay.” hoy i Clare.
Jereo ny lahatsary nataon'i Miho sy Clare ao amin'ny L Japan ao amin'ny YouTube, ao anatin'izany ny fampahafantarana tenin-jatovo momba ny fiarahan'ny samy vehivavy Japoney: